ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်ရေး အန်အယ်လ်ဒီ အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်ရန်ရှိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်ရေး အန်အယ်လ်ဒီ အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်ရန်ရှိ
Posted by politicalview on Aug 23, 2010 in News |2comments
အန်အယ်လ်ဒီ အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်ရန်ရှိ
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်ရေး ဗျူဟာ အသေးစိတ် ထုတ်ပြန်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောကြားသည်။
ယမန်နေ့က အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် (၇) ဦးနှင့် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ဝင် (၈) ဦးတို့ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ဘယ်သူကတော့ဖြင့် ဘယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာ၊ မဲပြားက ဘယ်လိုပုံစံ၊ ဘယ်လို မဲပေးရမှာ၊ အခြား စည်းကမ်းချက်တွေက ဘယ်လို စသဖြင့် အဲဒါတွေ ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့ ခုဏက ပြောတဲ့ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတဲ့ဟာတွေ ထွက်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ အခြေအနေပေါ် ကြည့်ပြီး ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ကြမယ်လို့ ကျနော်တို့ သဘောထားရှိပါတယ်” ဟု ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောကြားသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမည့်ရက် ထွက်ပေါ်လာပြီး တပတ်အကြာတွင် အန်အယ်လ်ဒီပါတီဝင်များအနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်မည်၊ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနှင့်အညီ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် မဲမပေးလိုက မပေးဘဲ နေပိုင်ခွင့် ရှိသည်ဟု အန်အယ်လ်ဒီက ယမန့်နေ့က ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဟု ကြေညာသော်လည်း ပြည်သူလူထုအတွင်း မဲပေးရမည့် ပုံစံ၊ အမတ်လောင်းများ၊ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့်ပါတီများ စသည်တို့ကို အသေးစိတ် မကြေညာနိုင်သေးပေ။“သပိတ်မှောက်မယ်ဆိုတာ ကျနော်တို့ ၀င်ပြီး မပါဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါပဲ။ မပါဘူးဆိုတာကိုပဲ၊ မပါဝင်ဘဲ သပိတ်မှောက်ထားတယ် ဆိုတာကိုပဲ ကျနော်တို့က ဘယ်လို အကောင်အထည်ဖော်မလဲ ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ခုဏကပြောတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေက ဘာမှ ပုံပေါ်လာတာ မရှိသေးဘူး။ အဲတော့ ကျနော်တို့လဲ အဲဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးခြင်း မရှိသေးဘူးဆိုပြီး မနေ့က ရပ်ထားလိုက်တာပါ” ဟု ဦးအုန်းကြိုင်က ပြောသည်။နအဖကောင်စီက ထုတ်ပြန်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများသည် တရားမျှတမှုမရှိသောကြောင့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီက ယခုနှစ် မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ပါတီအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ယခု ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
NLD have the duty to lead the general public in this difficult time. People are generally not keen to give their vote in this awkward election. Some guys think it is better than nothing at all so we got to take the chance given by Than Shwe. Than Shwe would not give any thing beneficial to general public. He like to see every inches of danger effecting the public. So what can we expect from Than Shwe? Bad things for people. Military dictatorship. NLD is giving voters education and ushering in the Boycott Campaign. It is the only mean public can do to dis-empower Than Shwe. Internationally, leading nations are preparing to bring the Junta to criminal court. Thirdly, Burma campaigns is organizing many countries to reject the election results as soon as Than Shwe announce victory. Than Shwe had become very dirty after this election preparation. There is no way nations would recognize his dirty methods. This could be downfall of him. I urge all people of Burma to listen to NLD`s voter education and make up the mind to boycott the election.